खोटाङमा सरकारी दररेट भन्दा बढी भाडा असुल्ने हेलिकप्टरलाई कारवाही गर्न मन्त्रालयको निर्देशन – Rastriya Yuvajagaran News
खोटाङमा सरकारी दररेट भन्दा बढी भाडा असुल्ने हेलिकप्टरलाई कारवाही गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
२७ श्रावण २०७६, सोमबार १९:५६012
नेपाल सरकारले २०७२ चैत ७ गतेको निर्णयबाट तोकिएको दररेट अनुसार उडान भए नभएको, निर्धारित दरभन्दा बढी हो वा होइन ? उजुरीको सम्बन्धमा के भएको हो ? दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने सर्वसधराणको उपचारसँग जोडिएको विषय भएकोले छानविन गरी यथार्थ रिपोर्ट बुझाउन प्राधिकरणलाई भनिएको छ ।
रमेश रिजाल (दिवस)
खोटाङ, २७ साउन २०७६ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तोकिएभन्दा बढी भाडा लिने हेलिकोप्टर कम्पनीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । हेलिकप्टरहरुले बिरामी बोक्दा पनि तोकिएको भन्दा दोब्बर भाडा लिएको भनेर परेको उजुरीका आधारमा त्यस्ता हेलिकप्टर कम्पनीलाई कारवाही गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । पछिल्लो समयमा प्रभु हेलिकोप्टार कम्पनी छानविनको दायरामा आएको छ । उक्त कम्पनीले बिरामीका लागि चार्टर गर्दा खोटाङ जानका लागि ३ लाख १५ हजार मागेको भन्दै उजुरी गरेपछि कारवाहीका लागि निर्देशन दिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । खोटाङ सेवा समाजका सचिव समेत रहेका बाजिन्द्र बिष्टले खोटाङको सावाकटहरेबाट बिरामी ल्याउन सुरुमा ३ लाख १५ हजार मागेको र पछि २ लाख ८५ हजारभन्दा कममा नजाने भन्दै सिकिस्त बिरामी ल्याउन नमानेको भन्दै साउन १८ गते मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए।
नेपाल सरकारले २०७२ चैत ७ गतेको निर्णयबाट तोकिएको दररेट अनुसार उडान भए नभएको, निर्धारित दरभन्दा बढी हो वा होइन ? उजुरीको सम्बन्धमा के भएको हो ? दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने सर्वसधराणको उपचारसँग जोडिएको विषय भएकोले छानविन गरी यथार्थ रिपोर्ट बुझाउन प्राधिकरणलाई भनिएको छ । नियमानुसार आर ४४ समूहका हेलिकोप्टरको प्रतिघण्टा उडान दर एक हजार अमेरिकी डलर निर्धारण गरिएको छ।
Related tags : KHotang Helipad
खोटाङको हलेसीमा शिवभक्तहरुको भिड
यो खबर हेर्नुहोला । : "खोटाङमा सरकारी दररेट भन्दा बढी भाडा असुल्ने हेलिकप्टरलाई कारवाही गर्न मन्त्रालयको निर्देशन". यहाँ लिन्क छ : https://yuvajagaran.net/?p=19201. Thank you